AJAX၊ သင်၏ပြည့်စုံသောလုံခြုံရေးစနစ်။ Gadget သတင်း
ငါတို့မှာရှိတယ် မြင်တယ် ကြိုးစားခဲ့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ website တွင် ကင်မရာမျိုးစုံ ဝိုင်ဖိုင်ချိတ်ဆက်မှုနှင့်အတူဗီဒီယို ကြောင်းလုံခြုံရေးစနစ်ကအဖြစ်ပြုမူ။ streaming connection နှင့် application အချို့တို့၏ကျေးဇူးကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ရုပ်ပုံများကိုတိုက်ရိုက်ရယူနိုင်သည်။ Ajax ကတစ်လှမ်းတက်သွားတယ် နှင့်ကျွန်တော်တို့ကိုကမ်းလှမ်းခဲ့သည် အလွန်ပြည့်စုံကိရိယာအစုံ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်ကိုပိုပြီးလုံခြုံစေမယ့်လုံခြုံရေး။
ရွေ့လျားမှုအာရုံခံကိရိယာများနှင့်ညဉ့်ရူပါရုံပါသောကင်မရာများသည်ကျွန်ုပ်တို့လိုချင်သောနေရာတိုင်းတွင်နေရာအချို့ကိုထိန်းချုပ်နိုင်သည်။ ဒါပေမယ့် Ajax လုံခြုံရေးစနစ်က အတူတကွချိတ်ဆက်ကြောင်း 10 ခုကွဲပြားခြားနားသောအစိတ်အပိုင်းများကိုတက်၏ဖွဲ့စည်းထားခြင်း, အစွမ်းထက်ကောင်းမွန်စွာထပ်တူကွန်ယက်ဖန်တီးပါ။ ဖွဲ့စည်းကြောင်းထုတ်ကုန်များအစုတခု အမှန်တကယ်လုံခြုံရေးစနစ်.
1 AJAX၊ အကောင်းဆုံးအိမ်လုံခြုံရေးစနစ်ဖြစ်နိုင်သည်
2.1 အဓိကအခြေစိုက်စခန်း Hub 2
2.2 HomeSiren နာယက
2.3 FireProtect ရှာဖွေစက်
2.9 SpaceControl နှင့် Button
3 AJAX၊ နိမ့်ဆုံးတပ်ဆင်မှုနှင့်အများဆုံးကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်
4 ဝိုင်ဖိုင်လား၊ မဟုတ်ဘူး
5 AJAX၊ သင်ရှာနေသောလုံခြုံရေးစနစ်
6 AJAX လုံခြုံရေးစနစ်၏ကောင်းကျိုးနှင့်ဆိုးကျိုးများ
လွန်ခဲ့သောရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ကကျွန်ုပ်တို့သည် Ajax မှအဆိုပြုထားသောအိမ်လုံခြုံရေးကိရိယာအစုံအလင်ကိုရရှိခဲ့သည်။ ငါတို့ပြောသကဲ့သို့, တစ် ဦး ကအလွန်ပြည့်စုံ pack ကို ဒြပ်စင် ၁၀ ခု၊ နောက်ထပ်များများကိုထပ်ထည့်နိုင်သည် အတူတကွဖွဲ့စည်းရန်တစ် ဦး ချင်းစီကတခြားဖြည့်သောငါတို့လိုအပ်ချက်များအရသိရသည် စျေးကွက်ထဲတွင်အပြည့်စုံဆုံးနှင့်အဆင့်မြင့်အိမ်တွင်းနှိုးစက်အစုံ.
အလိုရှိ Ajax လုံခြုံရေးစနစ်ကိုဝယ်ပါ? အခု သင်ဒီ link ကနေဝယ်နိုင်ပါတယ်.
ဒီစိတ် ၀ င်စားစရာပစ္စည်းကိုအပိုင်းတစ်ပိုင်းစီခွဲခြားပြီးလေ့လာသွားမှာပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်တွင်နှိုးစက်တစ်ခုပေးရန်လစဉ်ပေးရသောစျေးနှုန်းများကိုကြည့်ခြင်း, ရလဒ် တကယ်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏နေအိမ်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သောကာကွယ်မှုကိုရရှိလိမ့်မည် အခကြေးငွေမလိုအပ်ပါ, ပင်ကြီးစွာသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမရှိနေမည်။
အဓိကအခြေစိုက်စခန်း Hub 2
Es အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့လုံးရဲ့ ဦး နှောက်။ ရှိပါတယ် ကြိုးမဲ့အင်တာနက်ချိတ်ဆက်မှုနှင့်သင်ပါဝါကြိုးလိုအပ်သည်။ သူလား လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလိုအပ်ကြောင်း device ကိုသာသော်လည်း လည်း တစ်တပ်ဆင်ထားသည် ၁၆ နာရီအထိကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရှိသည့်ဘက်ထရီလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပြတ်တောက်မှုရှိရင်ဘာဆက်ဖြစ်မှာလဲ။ ဒါ့အပြင်ရှိပါတယ် SIM ကဒ်အထိုင်နှစ်ခု ဒါကမင်းကိုရေတွက်နိုင်တယ် ကွန်ယက်မရှိဘဲဆက်သွယ်မှု။ Hub2အခြေစိုက်ရန် ကျန်ကျန်တဲ့ element များ၏တစ်ခုချင်းစီကိုအိမ်ကွန်ယက်ကိုဖန်တီးရန်ချိတ်ဆက်နေရာဖြစ်သည် လုံခြုံရေး။
၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်နာမကိုအမှီညွှန်ပြ, စပိန်အတွက်ကြောင့်တစ်ခုခုဖြစ်လိမ့်မယ် "ပြည်တွင်းဥ" "။ အဲဒါပါ သေးငယ်တဲ့စပီကာကျန်အစိတ်အပိုင်းများကဲ့သို့ကြိုးမဲ့။ ဘယ်တော့လဲ ကျူးကျော်, မဆို အာရုံခံကိရိယာ ခွင့်ပြုချက်မရှိပဲ ၀ င်ရောက်မှုကိုပို့ပေးသည်၊ သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့စီစဉ်ထားသည့်အရာပေါ် မူတည်၍၊ စနစ်ကသက်ဝင်လှုပ်ရှားသည် အသံကျယ်။ လုပ်ငန်းဆောင်တာရှင်းပါတယ် ကျွန်ုပ်တို့အိမ်၌ရှိလျှင်၊ ထိုအခါတစ်ချိန်တည်းမှာ အလားအလာရှိသောကျူးကျော်သူများကိုအဟန့်အတားဖြစ်စေသည်.
ကောင်းမွန်သောလုံခြုံရေးစနစ် ကျွန်ုပ်တို့ကိုပြင်ပနှင့်အတွင်းပိုင်းအန္တရာယ်များမှကာကွယ်ပေးသည်။ Ajax ၏အိမ်စနစ်တွင်လည်းရှိသည် မီး၏အမှု၌ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး။ ငါတို့မှာadetector များ မီး ကြောင်းဆေးလိပ်သောက်ဖို့အလိုအလျှောက်တုံ့ပြန်အဖြစ် အပူချိန်ကြီးမားတဲ့တိုး။ ဒီကိရိယာမှာလည်းရေတွက်ပါတယ် ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ကွားနိုငျနှိုးဆော်သံနှင့်အတူ မီးခိုးသို့မဟုတ်မီးအန္တရာယ်များကြုံရလျှင်ကျွန်ုပ်တို့အားသတိပေးလိမ့်မည်။
Ajax လည်းသူ့အကြောင်းစဉ်းစားသည် ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်သည်ရေယိုစိမ့်မှုနှင့်ရေကြီးမှုဒဏ်ကိုခံရနိုင်သည်။ ဤ detector များ ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည် ရေကြီးမှုအန္တရာယ်ဒေသများတွင်နေရာချထားရန်ဥပမာ - အဝတ်လျှော်စက်ကဲ့သို့သောပစ္စည်းကိရိယာများ၏ဘေးတွင်။ ၎င်း၏အထူးအာရုံခံကိရိယာများကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဒါကြောင့်ရေကို detect သောအခါအလိုအလျှောက်အကြောင်းကြားပါလိမ့်မယ် သိပ်နောက်ကျသွားပြီဆိုရင်ပြtheနာကိုဖြေရှင်းနိုင်တယ်။
DoorProtect သည် အခြေခံကို aperture အာရုံခံကိရိယာ။ ၎င်းအတွက်အသုံးပြုသည် တံခါးများနှင့်ပြတင်းပေါက်များ၏အဖွင့်အပိတ်ကိုထိန်းချုပ်သည်။ ဒီကိရိယာအစုံမှာတစ်ခုသာလာပေမဲ့များသောအားဖြင့်အိမ်ထဲဝင်လို့ရနိုင်မယ့်ပြတင်းပေါက်တွေမှာနေရာအတော်များများထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ မည်သည့်တံခါးကိုသို့မဟုတ်ပြတင်းပေါက်ဖွင့်လျှင် se အသိပေးလိမ့်မယ် အလိုအလျောက်စနစ်မှ activated သောအာရုံခံကိရိယာ၏သတိပေး
ဒီနေရာမှာငါတို့ရှာပါ အခြားရွေ့လျားမှုအာရုံခံကိရိယာ, ဒါပေမယ့်ဒီအမှု၌ အများကြီးပိုအဆင့်မြင့်။ MotionCam တွင်အချက်ပေးမှုများကိုစစ်ဆေးရန်ဓာတ်ပုံကင်မရာတစ်ခုရှိသည်။ detector ကိုဖွင့်သည်နှင့်တပြိုင်နက်ဓာတ်ပုံများစွာရိုက်ပါ ပိုင်ရှင်နှင့်လုံခြုံရေးကုမ္ပဏီ (ရှိလျှင်) ကကျူးကျော်မှုသည်အမှန်ဖြစ်ကြောင်းသို့မဟုတ်သတိပေးမှုသည်အချို့သောသတိမဲ့မှုဖြင့်ပြုလုပ်ထားခြင်းရှိမရှိယုံကြည်ရန်ဖြစ်သည်။ ကမ်းလှမ်းချက်များ resolution 640 x 480။ ပြီးတော့အဲဒါရှိတယ် ၄ နှစ်အထိသက်တမ်းကိုကတိပေးသည့်အစားထိုးဘက်ထရီ.
ဒါကမဟုတ်ပါဘူး စမတ် plug ကို ကျွန်တော်ဈေးကွက်ထဲမှာရှာတွေ့နိုင်သလောက်အသုံးပြုရန်။ မည်သည့်အချိန်တွင်မဆို၎င်းကိုအသုံးပြုရန်စီစဉ်ထားခြင်းအပြင်၎င်းကိုအသုံးပြုရန်စီစဉ်ထားခြင်းအပြင်၎င်းသည်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းများစွာရှိသည်။ ထို socket ဖြစ်ပါသည်, ဒါ့အပြင်၊ nos စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု၏စောင့်ကြည့်မှုကမ်းလှမ်း.
ဒါဟာဖြစ်ပါသည် စနစ်ထိန်းချုပ်မှုကီးဘုတ် အိမ်တံခါးဝမှာငါတို့ရှာတွေ့နိုင်တယ် အိမ်ထဲရှိမည်သည့်နေရာကိုမဆိုကျွန်ုပ်တို့ခေါ်ဆောင်သွားနိုင်သည် နှင့်ပုံမှန်အလုပ်လုပ်တယ်။ ၎င်းသည်လက်လှမ်းမီမှုနှင့်ပါးလွှာ။ ပေါ့ပါးသောဒီဇိုင်းသယ်ဆောင်နိုင်မှုကိုကျွန်ုပ်တို့လိုချင်သောနေရာတိုင်းတွင်ရနိုင်သည်။
SpaceControl နှင့် Button
နောက်ဆုံးကျွန်ုပ်တို့ရှိသည် အနည်းငယ်ဝေးလံခေါင်သီ ကမ်းလှမ်းသည် ပြီးပြည့်စုံသော system ကိုထိန်းချုပ်။ ငါတို့တွေ့တယ် ထိတ်လန့်ခလုတ်ကိုဒါမှမဟုတ်။ ထို့အပြင် မတူညီသောအချက်ပေးစနစ်များကိုပြုပြင်ခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်လုပ်ခြင်းဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည်.
ကြယ်သီး ချက်ချင်းအကြောင်းကြား တစ် ဦး ကျူးကျော်, ဓာတ်ငွေ့ယိုစိမ့်သို့မဟုတ်မီးနှင့်ပတ်သက်။ နှိုးဆော်သံကိုလက်ခံရရှိစင်တာရန်။ တစ်ချက်နှိပ်ရုံဖြင့်သင်ဆေးကုသမှုခံယူနိုင်သည် နှင့်မိသားစုဝင်များကျန်းမာရေးရုတ်တရက်ယိုယွင်းပျက်စီးမှုအကြောင်းသတင်းပို့ပါ
Ajax Home Security Kit ကိုအထူးပြုလုပ်သောအသေးစိတ်အချက်တစ်ခုမှာ၎င်းကိုဖြစ်သည် အားလုံး၎င်း၏အစိတ်အပိုင်းများကိုကြိုးမဲ့ဖြစ်ကြသည်။ တစ်ဦးက network cable နှင့် power cable လိုအပ်သော control center မှလွဲ၍ကျန်အပိုင်းများကိုတပ်ဆင်ရန် (သို့) ကြိုးများမလိုအပ်ဘဲမည်သည့်နေရာတွင်မဆိုကျွန်ုပ်တို့အိမ်တွင်နေရာယူထားနိုင်သည်။ အားလုံးရှိသည် အစားထိုးကိုယ်ပိုင်ဘက်ထရီ ကြီးမားတဲ့ကြာချိန်၏။
ထုတ်လုပ်သူကအသုံးပြုသူများအားပရော်ဖက်ရှင်နယ်တပ်ဆင်မှုကိုရွေးချယ်ရန်အထူးအကြံပြုသည်- မှားယွင်းသောနှိုးစက်များကိုကာကွယ်ပေးသည် အကောင်းဆုံးနှင့်အပြစ်ဆိုဖွယ်မရှိသောစနစ်လည်ပတ်မှုကိုသေချာစေသည်.
ထိန်းချုပ်မှုစင်တာကိုချိတ်ဆက်ရန်l ဒီကိရိယာအစုံပါတဲ့ဒြပ်စင်တစ်ခုချင်းစီကို။ ကျွန်ုပ်တို့သည် App ကိုယ်တိုင်မှတဆင့်ရိုးရှင်းသောအဆင့်အနည်းငယ်ကိုလိုက်နာရန်လိုအပ်သည်။ အာရုံစိုက်သကဲ့သို့ရိုးရှင်းသော QR codes တွေကို ပစ္စည်းတစ်ခုချင်းစီ၏ Ajax အိမ်လုံခြုံရေးကွန်ယက်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာရန်။
ရေးသားသူ: Ajax စနစ်များ
အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုချင်းစီအကြားဆက်သွယ်မှုသည်ကြီးမားသောအပေါင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ Ajax သည်၎င်း၏ဆက်သွယ်မှုကို“ Jeweler” ဟုခေါ်သောကိုယ်ပိုင်စီးပွားဖြစ်စနစ်ကိုအခြေခံသည်။။ နှင့်အတူနယ်ပယ်ကမ်းလှမ်းတဲ့စနစ် 2000 မီတာအထိတည်ငြိမ်သောဆက်သွယ်မှုတစ် ဦး pass ဖြစ်ပါတယ် ဘလူးတုသ်ပေးနိုင်သောအရာများထက်များစွာသာလွန်သည်ဥပမာသည်။
အဆိုပါ Jeweler ဆက်သွယ်မှု protocol ကို ၎င်းသည်ပါ ၀ င်မှုအနည်းငယ်သာနှင့်အလိုအလျောက်ဒေတာစာဝှက်စနစ်ကိုအသုံးပြုခြင်း၏အားသာချက်ကိုပေးသည်။။ ရလဒ်အရာ ကြီးမားသောဘက်ထရီသက်တမ်း ၎င်း၏အစိတ်အပိုင်းများကို၏။
မင်းတို့ပြခဲ့တဲ့အတိုင်း Ajax မှတင်ပြသောအိမ်လုံခြုံရေးစနစ်သည်တကယ်ပြည့်စုံသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်သည်လုံခြုံမှုရှိစေရန်ကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေနေသည့်နည်းပညာအားလုံးပေးထားသည်။ ကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာသူများ၏အန္တရာယ်မှကာကွယ်နိုင်သော်လည်းမီးသို့မဟုတ်ရေလွှမ်းမိုးမှုဒဏ်ခံရနိုင်သည့်အန္တရာယ်များ (သို့) ပျက်စီးမှုများမှလည်းကာကွယ်ပါ။ အသုံးပြုသူများမှာ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်စောင့်ကြည့်မှု၏ရွေးချယ်မှု, လည်းရရှိနိုင်ပါသည်။
၎င်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုချင်းစီ၏လက်ရှိနှင့်အလွန်သတိထားဒီဇိုင်း။ ဒီဇိုင်းသည်လုံခြုံရေးစနစ်ကိုဆုံးဖြတ်ရာတွင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အချက်များအနက်မှတစ်ခုမဟုတ်သော်လည်းမည်သို့ပြုလုပ်ရမည်ကိုသိရခြင်းကအလွန်ကောင်းမွန်သည် က compose သောသူအပေါင်းတို့သည်ဒြပ်စင်အတူတူပင်စတိုင်စောင့်ရှောက်လော့။ ဘယ်နေရာမှာမဆိုတိုက်ပွဲဝင်မည်မဟုတ်သောသမ္မာသတိရှိကြလော့။
una လျင်မြန်လွယ်ကူသောတပ်ဆင် မည်သူမဆို၏လက်လှမ်းမမီအတွင်း။ အသုံးပြုမှုကိုအလိုအလျောက်လွယ်ကူစွာပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်သည့်အလွန်ပြည့်စုံသောလျှောက်လွှာနှင့်ဆက်သွယ်မှုနှင့်တပ်ဆင်မှုစနစ်တို့ဖြစ်သည်။
El ပုံစံ ဒြပ်စင်တစ်ခုချင်းစီ၏တစ် ဦး ကယ်တင်တော်မူ၏ အချိုးကျနှင့်ကြော့လိုင်း ရရှိနိုင်အရောင်နှစ်မျိုးနှင့်အတူ, အနက်ရောင်သို့မဟုတ်အဖြူရောင်
၏ကြာချိန် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့် သင့်ရဲ့ဘက်ထရီများ၏နှစ်များတွင်တိုင်းတာသည်။
အားလုံး ကြိုးမဲ့ဒြပ်စင် မီတာ ၂၀၀၀ အကွာအဝေးရှိ Jeweler နည်းပညာကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ယေဘုယျ » reviews » AJAX၊ ခင်ဗျားရဲ့ပြည့်စုံတဲ့လုံခြုံရေးစနစ်